Kissing! How good is it? | The World of Pinkgold
little moon on July 24, 2008 at 12:52 pm said:
Oh great, I will try to kiss regularly …. 😛
စိုးထက် - Soe Htet ! on July 24, 2008 at 3:16 pm said:
ကျွန်တော် ကတော့ ရက်ပေါင်း ၁၆၀ လောက် စောင့်လိုက်ဦးမယ် … သေချာ ပြန်စမ်း ကြည့်မလို့ 😛
myooo.nyan on July 24, 2008 at 3:32 pm said:
ပင့်ဂိုလ်းရေ… အခုမှပဲ kiss အကြောင်းနားလည်သွားတယ်… ဟဲဟဲ.. kiss ဖလှယ်မဲ့သူတော့.. နောင်များကြမှ မေးကြည့်ရဦးမယ်..
May on July 25, 2008 at 5:45 am said:
Arr Bwar! 😛
လင်း on July 25, 2008 at 10:17 am said:
mm thinker on July 25, 2008 at 10:25 am said:
ပြီးတော့ Kissing အကြောင်း သိချင်နေရအောင်…ဟဲဟဲ
Pinkgold on July 25, 2008 at 10:54 am said:
သြော် Knowledge Sharing လုပ်တာကို တစ်မျိုးထင်တော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှင်
MELODYMAUNG on July 28, 2008 at 4:53 am said:
ဂယ်ပဲ..သူပြောမှပဲ……… အဟတ်ဟတ် 😛
Htoo Tay Zar on July 28, 2008 at 11:14 am said:
မှတ်ထားလိုက်ပြီ ဟိ ဟိ =)
ကိုသက်နောင်(phoeniz) on July 30, 2008 at 8:47 am said:
ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာဦးအစ ကနေ ခုချိန်ထိ
ကျန်းမာရေး အရ……… (ဟာ…ဟ)
ချစ်သူနဲ့ က ဝေးနေတာ ဆိုတော့ အနားက သူငယ်ချင်း
ကိုပဲ ကောက်နမ်းရတော့ မလို…..
Stanley on August 1, 2008 at 5:15 am said:
မပင့်ဂိုးရေးလိုက်မှာ ကျနော် အကြံရသွားတယ်ဗျာ။ Kiss ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ၂ ကယ်လိုရီလောက် သုံးရတယ် ဆိုတော့ သိပ်ဝလို့ ၀ိတ်ချချင်သူတွေ kiss များများနဲ့ ကြာကြာပေးကြပါလို့ နှိုးဆော်ရင် ကောင်းမလားလို့။ ဟီး။